Amafisin’ny Ny Fitsarana Eoropeana Fa Misy Fonja Miafin’ny CIA Ao Polonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2014 3:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, русский, Français, 日本語, English
Mivoaka amin'ny fomba ofisialy ankehitriny ny tsiambaratelo: Manana fonja miafina miasa ao Polonina ny CIA. Tamin'ny fiandohan'ity fahavaratra (ila-bolantany avaratra) ity ny Fitsarana Eoropeana Misahana ny Zon'Olombelona (ECHR) namoaka didy manamafy ny fisian'ireo fonja ireo ao anatin'ny sisintanin'i Polonina. Raha nidera ilay didy ny fikambanana iraisampirenena misahana ny zon'olombelona, dia miantsoantso kosa ny manampahefana sy ny mpanao gazety poloney sasantsasany fa tsy rariny atao amin'i Polonina izany. Ny hafa indray milaza fa fotoana anararaotan'i Polonina hamahana ny olan'ny fomba fitantanam-pirenena izao famoahana vaovao amin'ny fomba ofisialy izao.
Manitrikitrika ny ECHR fa manitsakitsaka ny andininy maro amin'ny Dina Eoropeana Momba ny Zon'olombelona i Polonina, ary tafiditra amin'izany andininy voahosihosy izany ny fandrarana ny fampijaliana sy ny fanaovana tsinontsinona ny voafonja, ny zo halalaka sy ho arovana, ary ny zo hanana fitsarana tsy miangatra. Lehilahy roa – Abu Zubaydah sy Abd al-Rahim al-Nashiri – izay voatazona sy nampijaliana tany amin'ny fonjabe tao Polonina, no nitondra ny raharaha teo amin'ny Fitsarana Eoropeana. Ho sandan'izany dia nonerana €130,000 ($170,700 USD) sy €100,000 ($131,200 USD) araka izao filaharany izao i Zubaydah sy al-Nashiri.
Nasehon'ny porofo fa nampiasaina hanaovana fonja miafina ny toby miaramila efa antitra tao Stare Kiejkuty tanelanelan'ny taona 2002 sy 2003. Ny asam-panadihadiana nataon'ny Washington Post sy ny Human Rights Watch tamin'ny 2005 no nampiseho ny fisian'ny fonja miafina, ary nisy ireo mpiasan'ny fitsikilovana Amerikana sy Poloney tsy nitonona anarana taty aoriandriana namoaka namoaka antsipirihany bebe kokoa momba izany tamin'ny gazety. Mbola nitsipaka ny fisian'izany fonja fampijaliana olona any Polonina izany ny governemanta Etazoniana sy Poloney.
Ravoravo tamin'ny didy navoakan'ny ECHR, izay navoakan'ny gazety ao Eoropa sy Etazonia ho lohateny lehibe, ny Helsinki Foundation, ONG lehibe iray misahana ny zon'olombelona ao Polonina. Mitovy amin'izany ihany koa dia niarahaba ny didim-pitsarana ho “manan-tantara” sy “vatolahy” famantarana ny ao amin'ny Amnesty International.
Didim-pitsarana mametraka vatolahy mamoaka ny anjara asan'i Polonina amin'ny toeram-pitazonan'ny CIA afenina sy hanaovana fampijaliana
Mandritra izany fotoana izany dia mifanipa-kevitra ny manampahefana sy ny politisiana poloney tamin'ity didim-pitsarana ity, ka misy ireo milaza fahamenarana, misy mitsipaka ary misy ny tezitra. Milaza, ohatra, ny Filoha Poloney Bronisław Komorowski, fa “mampanahiran-kevitra an'i Polonina” ilay didim-pitsarana ary mety hanimba ny toe-bolam-panjakana sy ny lazany eo amin'ny sehatra iraisampirenena. Leszek Miller, mpitarika ny Firaisankina Ankavia Demokratika (SLD) sady praiminisitra teo aloha, milaza ny fanapahan-kevitra ho “tsy marina sy tsy manaja etika.” Toy izao no nivoaka tao amin'ny kaonty Twitter ofisialin'ny SLD:
@Dariusz_Jonski: Manaja ny didin'ny ECHR raha amin'ny resaka CIA, miandry ny porofo izahay. Tokony hampakatra ny fitsarana amin'ity didy ity i Polonina.
Efa samy manana ny heviny ihany koa ny mpamoaka vaovao poloney. Mandà ny hanamelohana ny fisian'ny toeram-pitazonana miafin'ny CIA ao amin'ny sisintany poloney i Tomasz Lis, tonia mpanatanteraky ny gazety mivoaka isan-kerinandro Polska, amin'ny fandresen-dahatra fa mila manana ny “faritra manja” ihany koa ny politisiana. Nitaraina ny mpanoratra gazety Janina Paradowska fa nanasa ny tanany amin'ny fampijaliana any am-ponja i Etazonia, ary i Polonina irery ankehitriny no toa mizaka ny andraikitra. Ny mpanao matoandahatsoratra an-gazety Ewa Siedlecka, kosa etsy ankilan'izany, mibedy ny manampahefanan'i Polonina ho tsy nahavita nitandro ny zo fototry ny olombelona.
Nahavariana fa tsy nahitana fihetseham-po an-tserasera loatra ny didy navoakan'ny fitsarana ary voatsatson'ny lohatenin-gazety haingana. Ny fanehoan-kevitra nivoaka an-tserasera ataon'ny mpamaky dia akon'ny fahatezerana sy tsi-finoana notabatabain'ny politisiana maro. Maro ny nanombana fa mitongilana amin'ny anankiray fotsiny ny fifanaraham-piraisakinan'i Etazonia sy Polonina, ka i Etazonia no mitango ny tombontsoa rehetra. Mpiserasera iray Paweł Karpiński nanasongadina fa tokony hofariparitana toy ny tamin'ny rafitry ny vanim-potoana antenantenany misy eo amin'ny tompomenakely sy ny olona mpanoa azy ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena roa tonta.
Misy ihany koa ireo feo maro manolo-kevitra fa tokony hotsaraina ny filoham-pirenena nitondra tamin'izany fotoana izany, Aleksander Kwaśniewski, sy i Leszek Miller manokana satria fantatr'izy ireo ny fisian'ny fonja miafina ary nahazo ny fankatoavana avy amin-dry zareo. Izany fomba fijery izany angamba no marika hamantarana ny fisarahan-kevitra misy eo amin'ny fiaraha-monim-pirenena sy ny governemanta poloney tsikaritr'i Józef Pinior, iray amin'ireo mpitarika ny Solidarnosk nandritra ny taompolo 1980 tany. Ao amin'ny eritreriny momba ny didim-pitsarana no anandratany fa tsy nahavitana nanangana ny fahatezeram-bahoaka ny fisian'ny fonja tsy ara-dalàna an'ny CIA hanerena ny governemanta hamaly amin'ny fomba matotra. Tao amin'ny teniny dia mitoetra ny didin'ny ECHR “haika amin'ny politisiana, mpaneho hevitra ary mpikatroky ny zon'olombelona ao Polonina”.